जो बाइडेन अमेरिकाको ४६औँ रास्ट्रपतिमा निर्वाचित: के नेपाल हेर्ने अमेरिकी नजर फेरिएला? - आजकोNepal
जो बाइडेन अमेरिकाको ४६औँ रास्ट्रपतिमा निर्वाचित: के नेपाल हेर्ने अमेरिकी नजर फेरिएला?
admin २३ कार्तिक २०७७, 9:59 am
कार्तिक २३ । वर्तमान रास्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पराजित गर्दै डेमोक्र्याटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडेनले आफ्नो लागि व्हाइट हाउसको ढोका खोलेका छन् । दुई उम्कमेदवारबीच कडा टक्कर हुने अनुमान गरिएको बेला बाइडेनले ट्रम्पलाई फराकिलो अन्तरले हराउने देखिएको छ ।
न्युयोर्क टाइम्सले जनाएअनुसार ५ सय ३८ इलेक्टोरल भोट मध्ये बाइडेनले कम्तीमा दुई सय ७९ भोट सुरक्षित गरेका छन्। जबकी ट्रम्पले हालसम्म जम्मा २ सय १४ इलेक्टोरल भोट जम्मा गर्न सकेका छन् । अब सबै मत गनेर परिणाम आउदा सम्म बाइडेनले २ सय ९० र ट्रम्पले जम्मा जम्मी २ सय ३२ इलेक्टोरल भोट जित्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाललाइ केहि फरक पर्ला ?
अहिले सम्मको अवस्था र अमिरिकी नजरलाइ हेर्ने हो भने यो निर्वाचन परिणामले नेपालको लागि त्यस्तो उत्त्साहजनक केहि ल्याउने देखिदैन । हाल अमेरिकाको नजर एसियामा चीनको बढ्दो सक्रियतालाइ कम गर्ने मात्र देखिन्छ । यदि बाइडेनको चीन अथवा विकासुन्नीमुख देशको नीतिमा परिवर्तन आए मात्र केहि आस गर्ने ठाउ रहने कुटनीतिक जानकारहरु बताउछन । नत्र ट्रम्प जस्तै बाइडेनको पनि चीन नीति उही रहेको खण्डमा नेपाल र नेपाल जस्ता विकासुन्मुख रास्ट्रहरु अमेरिका र चीनको यो व्यापारिक युद्धको लागि मोहरा मात्र बन्ने पक्का छ ।
अमेरिकाले नेपाललाइ भारतको चस्माबाट हेर्ने गरेको नेपालका पररास्ट्रविदहरुले बताउने गरेका छन् । हुन पनि भारतको चीनसंगको कटु सम्बन्ध र भारत र अमेरिकाको चीनबिरोधि गठबन्धनले गर्दा बीचमा रहेको नेपाललाइ सोझो असर पर्ने पक्का नै छ । पुर्व पररास्ट्रमन्त्रि रमेशदेव पाण्डेले एक अन्तरवार्तामा ” अमेरिकाले नेपाल नीतिलाइ भारतले नै समाल्होस भन्ने चाहेको देखिएको” बताएका थिए ।
नेपाल छायामा पर्नुको कारण मध्ये एक नेपालको कम्जोर कुटनीति र मगन्ते पररास्ट्र नीति रहेको पररास्ट्र मामिलाका जानकार डा. रामानन्द थापा बताउछन् । ” कुनै बेला थियो जब नेपालको सिद्धा सम्बन्ध व्हाइट हाउससंग हुने गर्थ्यो ।” उनि भन्छन ” राजा महेन्द्र र राजा विरेन्द्रको पालाको चतुर कुटनीति नेपालको आज भइदिएको भए हामी भारत संग पनि यति निरिह हुनु पर्ने थिएन ।”
पुर्व राजदुत हरिहर सिक्देल थापाको कुरामा सहमत छन् । उनि भन्छन “नेपालको अरुसंग आसगर्ने र माग्ने मात्र नीति नीति देखियो । उसैमाथि नेताहरुको दलगत स्वार्थ सिद्द गर्न अस्वाभाविक विदेशी हस्तक्षपलाइ पनि प्रसय दिने चलनले गर्दा शक्ति रास्ट्रहरुको नजरमा नेपालको महत्व घट्दै गएको छ। ” उनले त्यहि कारणले भारत अमेरिका जस्ता रास्ट्रहरुले आफ्नो नेपाल मामिला कर्मचारीतन्त्रको हातमा दिने गरेको बताए”।
अब नेपालले के गर्दा राम्रो ?
पुर्व राजदुत थापा अमेरिकाको बदलिदो शासन सत्तालाइ नेपाल हेर्ने अमेरिकी नजर बदल्ने एक अवसर पनि भएको बताउछन । उनले “नेपालले आफ्नो कुटनीतिक अस्त्रलाइ तिखार्नु पर्ने” बताए । उनले “कुनै पनि रास्ट्रको अर्को रास्ट्रसंगको स्वार्थ सिद्ध गर्ने बलियो हतियार भनेको नै कुटनीति हो । अनि नेपालको असंलग्न पररास्ट्र नीति मित्र रास्ट्रहरुलाइ स्पस्टसंग बुझाएर उनीहरुको विस्वास जित्न सक्नु पर्ने बताए ।
कुटनीतिक जानकारहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्थरमा नेपालको महत्व र दरिलो उपस्थिथिको लागि त पहिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा छिमेकी हस्तक्षप पूर्ण रुपमा बन्द गर्न सक्नु पर्ने बताउछन । उनीहरुले नेपालमा छिमेकि हस्तक्षर र अनुचित प्रभाव रहदासम्म नेपालको असंलग्न पररास्ट्र नीति र अन्तरास्ट्रिय छवी धमिलो हुदै जाने खतरा रहेको देख्छन।
चीनको “वान बेल्ट वा रोड” र अमेरिकाको “एमसिसि” को बिचमा नेपालले आफ्नो नीतिको तालमेल मिलाउन सकेन भने नेपालको पररास्ट्र सम्बन्ध सुद्रिनगाह्रो पर्ने विश्लेसकहरु बताउछन । त्यसको लागि सरकारले अब विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु पर्ने उनीहरुको सुझाब छ ।